Iinkcukacha eziphezulu ze-5 malunga nophando lwe-Cialis powder | AASraw Cialis powder
I-Boldenone powder Series
I-Methenolone powder Series
I-Nandrolone powder Series
I-Trenbolone powder Series
Series Testosterone powder Series
Iinkcukacha eziphezulu ze-5 malunga nophando lwe-Cialis powder
/Blog/Cialis , tadalafil/Iinkcukacha eziphezulu ze-5 malunga nophando lwe-Cialis powder
ezaposwa ngomhla 01 / 13 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Cialis, tadalafil.
Eli nqaku lihlolisisa ngolwazi oluninzi lwabantu abakhathalelayo, abantu abadinga isondo sokuphucula ngokwesondo, i-Cialis powder, i-Cialis VS, i-Cialis powder review, i-Q & A malunga ne-powder powder ... Ngokucwaninga kwe-Cialis powder, sinokwazi ukuba, isondo sokwandisa isondo, ngoko ke abantu abaninzi kakhulu ngokuvelisa umkhiqizo weCialis ukuthenga i-powder kwi-intanethi ye-powder supplier, eyenza i-cialias iziyobisi.
Yintoni i-Cialis powder?
igama Tadalafil / Cialis
Umzimba I-insoluble emanzini okanye ngotywala, i-soluble e-Acetic acid, i-ethyl ester.
Ukulahleka ekumiseni ≤0.5%
Intsimbi enzima ≤10ppm
Ixesha elimisiweyo 30minutes
kwiBanga KwiGrade yeBanga
Yintoni i-Cialis powder eyenzayo?
I-Cialis powder kwakudla ngokubanjiswa kuzo zonke iintlobo zeefom, ezithengiswa ngeefom ze-Cialis ithebhulethi, iifayile ze Cialis ... Uphando lweCialis powder lubonisa, abaninzi abantu bathenga i-Cialis powder ukususela kwii-medicinal drugs. iDrug Cialis yi-PDE5 inhibitor esetyenziselwa unyango lwe-erectile dysfunction kumadoda. Amadoda amaninzi ahlala ejongene neengxaki zentsebenzo enzima ngexesha elithile ebomini babo. Ezi ngxaki zibandakanya ukungakwazi ukuhlaziya, ukubuyisela kwakhona ukuhlanjululwa apho umlindi ungena kwi-bladder endaweni yepenisi kunye nokungakwazi ukugcina ukulungiswa xa kwenzeka.
Le ngxaki ebaluleke kakhulu kubantu abaninzi apho, njengoko imeko ihlala isenza amadoda achaphazelekayo ukuba avame ukuziva ecinezelekile ngokuzithoba. Yenza abantu abanjalo bazive bengaphantsi komntu kwaye bayeke bazibuze indlela yokuhlangabezana nayo. Nangona kunjalo, ukuqaliswa kwe-cialis kuye kwaphakamisa ithemba labaninzi kwaye linika ithemba leentsuku ezingcono. Oku kuncediswa kuboniswa unyango lwabantu abane-erectile dysfunction (ED), amadoda aneempawu kunye neempawu ze-prostatic hyperplasia (BPH) kunye namadoda ane-ED kunye nemiqondiso kunye neempawu ze-BPH. Yona yeyona ndlela ekhuselekileyo kunye eyona ndlela efanelekileyo yokufumana isisombululo esisigxina kwingxaki ye-ED kumadoda. Inkqubo ibandakanyeka ilula kakhulu kwaye iyancinci kwaye unokulindela umphumo ontle ngexesha elifutshane kunokwenzeka, xa unako ukuphumeza ukusetyenziswa kolwazi olukhuselekileyo lwezokhuseleko lwe-Cialis.
Ezi zeziyobisi eziyaziwa ukuba ziyimpumelelo kwaye zisebenza kakuhle ekujonganeni ne-ED. Bayaziwa ngokukwazi kwabo ukuvusa uhlobo oluthile lokubonakalisa ubulili kumntu ngamnye .Kukhona iCialis neSildenafil (viagra) .IiViagra kunye neCialis ziyi-PDE-5 inhibitors. Ziyabuyisa imisipha ehamba phambili kwimithambo yegazi ehambisa ipeni. Olu phuhliso lwandisa ukuhamba kwegazi ukunceda ukulungiswa, kodwa iCialis ibonakala iyathandwa kakhulu, uphando lweCialis powder lubonisa isizathu:
I-Cialis isebenza ngokukhawuleza kuneViagra
i-tadalafil i-benefit benefitsNakuba bobabini beqala ngokukhawuleza kwezenzo, iTadalafil isebenza ngokukhawuleza kuneViagra. Nangona i-Viagra idla ngokuthatha imizuzu eyi-20-30, i-Cialis inokusebenza kwi-15-20 imizuzu. I-Cialis iphinda ifumaneke njenge-Cialis Daily, enokuthathwa kanye ngosuku, kwaye iya kukukunceda ukuba uphumelele ukulungiswa nanini na ngexesha lonke.
I-Cialis idlulileyo ixesha elide kuneViagra
I-Cialis inexesha elingaphezulu kwezenzo kune-Viagra, kwaye ihlala isemzimbeni ukuya kwiiyure ze-36. Oku kuye kwaziwa ngokuba yi-"Weekend Pill". Ezi zinzuzo ngenxa yokuba awudingi ukucwangcisa idoti yakho kufuphi nayo nayiphi na into efunyenweyo yesondo, kodwa endaweni yoko ungasebenzisa iziphumo zayo ukuya kwi-12, ngezinye iiyure ze-36 emva kokuyithatha.
I-Cialis vs Viagra- Yiyiphi engcono yokusetyenziswa kwansuku zonke?
Sonke siyazi ukuba umlinganiselo we-Viagra- 100mg kunye neloluhlu ukusuka kwi-50-150 mg kuxhomekeke ekubeni ngubani othabathayo.
Ngoxa i-Cialis, isilinganisi esinconywayo ngu-20mg kwaye oku kuya kuphuculwa kwi-40mg.
Oku kuthetha ukuba xa umntu ekhetha ukusebenzisa i-Viagra imihla ngemihla, loo mntu kufuneka alungele ukuthatha iipilisi ze-4 ngosuku. Le nto yinto enobungozi yokwenza njengoko kukho imiphumo emibi echaphazelekayo kunye nokuthatha ngaphezulu i pilisi enye ngosuku. I-Cialis ngakwelinye icala ihlala ngaphezu kwelanga ukuba i pilisi enye igxinyiwe kwaye ngoko ke iyona nto ibhetele xa ifika ekusebenziseni imihla ngemihla. Oku kuyenziwe ngokucacileyo ngakumbi kucaciswe yi-NHS eyenzela ukuba inikwe abantu imihla ngemihla. Ngaloo ndlela, ukuba ungumsebenzisi wosuku, uCialis mhlawumbi angcono.
I-Q & A malunga nophando lwe-Cialis powder
Ngoxa senza I-Cialis powder uphando, senze i-intanethi, iiforam ezichaphazelekayo kunye nabanye abathengi bethu, sineenkcukacha ezithe vetshe, zikhona ezinye iimbuzo zabaxhasi abakhathalele ngakumbi, uphando lwe-Cialis powder lubonisa:
Ngaba ukulungiswa kwam kwindla ngokuqhelekileyo?
Ubungakanani bexesha eliza kuthatha ukulungiswa kwakho ukuhlalisa emva kokusebenzisa i-powder cialis iya kutshintsha ukusuka kumntu ukuya kumntu, ngokuqhelekileyo umfana omncinane uya kuhlala ehleli ixesha elide emva kokuba esetyenziswe, kunye nomntu omdala unokufumana ukuba balahlekelwa ukulungiswa ngokukhawuleza emva kokunyuka. Kodwa uya ku soloko ufumanisa ipenis yakho iya kubuya kwisimo sayo esingenasiphelo ngaphezulu okanye ngaphantsi kwexabiso eliqhelekileyo lexesha eliqhelekileyo lenzayo.
Ngaba abafazi bavunyelwe ukuthatha i-Cialis powder?
Omnye umbuzo amadoda amaninzi aya kubuza ukuba ngaba kukho nayiphi na inzuzo enokuba nayo kunye nomfazi wakhe okanye umlingani wesini kunye nentombi yesini esithatha i-Cialis powder zombini ngexesha elifanayo. Nceda uqaphele ukuba isizathu esona sizathu sokuba kufuneka usebenzise iTadalafil Jelly kukuba unyango lwe-erectile dysfunction, kwaye ngoko ayiyi kuba naluphi na uncedo oluya kuba lunikwe le nkunkuma kumfazi okanye iqabane lakho lomfazi. Eli qabane lingathatha ngokukhawuleza ukugula ukuxhatshazwa kwesinye seziphumo ezininzi zokuthatha le michiza ngoko phantsi kweemeko ukuba ngaba besifazane bafanele bathathe.
Ngaba le nkunkuma ingenza ndihlale ndilala ngesondo?
Xa uthatha i-Cialis powder awuyi kufumana ukuba unako ukwenza uthando ngaphezu kwexesha eliqhelekileyo, ukuba unobungozi bokuqala ukuxakeka kwaye unxungule ngale nto ke nceda uqhagamshelane noDokotela wakho njengoko le nkunkuma iza kukunceda ukugcina nokugcina ukulungiswa xa ubandezeleka nge-erectile dysfunction.
Ngaba ndingenayo enye idosi kamva?
Ngethuba nje uthabathe umlinganiselo wokuqala weli chiza kwaye ulandele imiyalelo echanekileyo yomyalelo ngoko uya kuvunyelwa ukuthatha elinye idosi ngaphakathi kwesikali esikhatywayo kwiincwadi. Nceda ungayithathi enye idiza le nkunkuma phantsi kweyiphi na imeko ukuba usengaphumelela kwindlela yokuqala yasekuqaleni. Uza kufumana zonke iirhafu zokulinganisa ezifanelekileyo kunye nexesha elifanelekileyo lokuwuthatha kwiincwadi eziza kule mveliso okulindeleke ukuba ufunde kwaye ulandele.
Ndivakalelwa kukuba ndimdala kakhulu kule mveliso
Nceda ungacingi ukuba uneminyaka endala ukuba ungasebenzise ngokupheleleyo le chiza, kuba kungakhathaliseki ukuba uneminyaka engakanani ukuba unobungozi obuphi na uhlobo lwe-erectile dysfunction kwaye unqwenela ukuba nokugcina impilo ephilileyo xa sele le nkunkuma uza kufezeka. Ngethuba nje ulandela imiyalelo kwaye usebenzise isilinganisi esilungileyo ke kukho ithuba eliphezulu lokusebenza ngempumelelo kuwe, ngoko-ke khumbula engqondweni yakho naluphi na ukungathandabuzeki ukuba usemdala ukuwusebenzisa!
I-Nitrate Based Medication kunye ne-Cialis powder
Ukuba okwangoku uthabatha nayiphi na iMicrosoft Medication, kufuneka ungathathi iViagra okanye i-Cialis powder, njengoko wenze njalo oku kunokubangela ukuba kubekho ukuphahla okukhulu kwimixinzelelo yegazi eya kuba nzima ukuyiphatha. Nceda ke ungagcini ukuthatha i-Viagra okanye I-Cialis powder Ngaba kufuneka uthathe nawaphi na amayeza e-Nitrate, ukuba ngokungathandabuzeki nceda uqhagamshelane noDokotela wakho.
Ukuhlaziywa kwepilisi ye-Cialis
Xa ugqiba ukuthenga i-Cailis powder, unokungazi kakuhle indlela abanye abavakalelwa ngayo, ngokubhekiselele, nantsi ezinye ze-Cialis powder reviews, uphando lwe-Cialis powder lubonisa:
Uqwalaselwe iCialison 9 / 11 / 2017
Ndineemfutshane ezimbini, enye ingxaki yokulungisa kunye
enye i-Prejature Ejaculation. Ngokokuqala ngqa, izolo ngoMgqibelo ebusuku, ndithatha i5mg Cialis. Emva kweyure enye, ndivakalelwa kwiminyaka yobudala ngenxa yesigxina esilungeleleneyo nesilungileyo kunye nolunye olongezelelweyo ubude kunye nobukhulu obubalulekileyo, emva kweminyaka emininzi. Kwayimangalisa ngokusebenza ngokusemthethweni okungagqithisi ukuqhubeka kunye nesigxina seyure kunye neendawo ezihlukeneyo.
Erectile Dysfunction "Ndimiselwe i-10mg Cialis kwi-ED. Ukususela ekuqalekeni ukuthatha izidakamizwa kwi-4pm andizange ndibone nayiphi na impembelelo de ndavuka ebusuku malunga ne-3am ene-erection eqinile. Enyanisweni ndavusa amaxesha ambalwa ngobusuku ngobusuku obulandelayo be-2 ngenxa yesizathu esifanayo. Ulwabelana ngesondo lulula kwaye ngokuqinisekileyo wenze umsebenzi! Impembelelo yecala kuphela yintloko ebumnene kakhulu ebusuku-ngoko ke ndandingazange ndifune i-paracetamol okanye nayiphi na into. Ngokuqinisekileyo akukho miphumo emibi emini. Ngenxa yoko ndagqiba kwelokuba ndizame ukunciphisa umthamo ukuze ndibone ukuba ndiyakwenza iipilisi ziqhubeke. Ndathenga i-tablet splitter kunye nehafu kwaye emva koko ndahlula i-10mg iziyobisi. Wathatha ikhefu kwikota nganye ngosuku kodwa ngoku iintsuku ezongezelelweyo. Sebenza kakuhle! "
I-Erectile Dysfunction "Uqale ukuthatha i-5 mg ezinyangeni ezimbalwa ezedlule kwaye kuphela xa ulala ngesondo. Kum mna le dose ithatha malunga neeyure ze-2 ukushaya kwaye idlulise usuku okanye i-2, nangona iphantsi ngaphantsi. Emva koko ndazama i-10mg .. iziphumo ezifanayo kodwa iziphumo ezingcono. (efana nokumangalisa okumangalisa). Nangona kwi-80% ukuhluleka kokusebenza kwengqondo ngaphambi kweCialis, isichengisiso njengoko sandibeka ngokupheleleyo. Ngokungaqinisekiyo ngamazwi. Nceda uzame wena. Isizathu esisodwa sokuba ndikwazi ukufika apha sisuka kwizithuba phambi kwam endikhuthazayo .. ngiyabulela niyabonga ... u-hugs and kisses :)) "
tags: bathenge i-Cialis powder, ukuthenga i-tadalafil powder, powder, tadalafil powder
I-sex hormore tadalafil powder: Iifayili ze-12 malunga nesondo sokuphucula isilwanyana ofuna ukuba wazi !!!
i-tadalafil enobumba obuhlaza ekwenzeni unyango lwe-erectile (ED)
I-raw tadalafil powder vs Raw sildenafil citrate powder
Izipho zonyaka ze-5 'Izipho ze-tadalafil Indlela yokuxuba i-trenbolone e-acetate powder ehlaza?
UDkt Patrick Young on I-Oxandrolone (Anavar) ipowder
UMichael McCoy on I-Oxandrolone (Anavar) ipowder
IDRA-21 powder (22503-72-6)
I-Canrenone powder (976-71-6)
Nandrolone propionate powder
Copyright © 2019 aasraw Wonke amalungelo agcinwe. Eyilwe ngu www.cofttek.com www.buyaas.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.phcoker.com